Dhageyso: Maxaa ka jira in Mooshin ka dhan ah xukuuamda Kheyre loo gudbiyay BF? - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Maxaa ka jira in Mooshin ka dhan ah xukuuamda Kheyre loo...
Dhageyso: Maxaa ka jira in Mooshin ka dhan ah xukuuamda Kheyre loo gudbiyay BF?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Xoghayaha Baarlamaanka Soomaalia Cabdi Kariin Xaaji Cabdi “Buux” oo ka hadlay warar maalmihii u danbeeyay la isla dhexmarayay ayaa been abuur ku tilmaamay in Baarlamaanka loo gudbiyay mooshin ka dhan Xukuumadda Soomaaliya.
Qaar ka mid ah Warbaahinta ayaa maalmihii u danbeeyay qorayay in guddoonka baarlamaanka Soomaaliya loo gudbiyay mooshin ka dhanka ah xukuumada Soomaaliya balse taasi been abuur lagu tilmaamay.
Xoghaye Buux ayaa sheegay in Wararkaas ay yihiin kuwo been abuur ah isla markaana aysan jirin wax qaraar ka dhan ah Xukuumadda oo Guddoonka Baarlamaanka loo soo gudbiyay.
Xukuumadda Soomaaliya ayuu sheegay in si wanaagsan u gudaneyso Waajibaadka saaran,islamarkaana loo baahan yahay in waqti ku haboon la siiyo.